Imithetho yeendaba zeNtlalo | Martech Zone
Ukuba uyifundile le bhlog ixesha elithile, uyazi ukuba ndiyayidelela imigaqo. Imidiya yokuncokola isencinci kakhulu ke ukusebenzisa imigaqo okwangoku kubonakala kungaphambi kwexesha. Abantu abakwi-FastCompany badibanisa ingqokelela yeengcebiso zezibizwa ngabo Imigaqo yeendaba zosasazo.
Le infographic yingqokelela yemithetho epapashwe kuhlelo lukaSeptemba lweli phephancwadi. Bendingazukuyibiza le mithetho njengoko ndophule eminye yayo kodwa ndafumana iziphumo… kodwa ndingacebisa kakhulu oku njengengqokelela enkulu yeengcebiso zokuphucula iinzame zakho zentengiso.
I-FastCompany ngoku iqokelela iingcebiso zakho. Unga bangenise kwi-intanethi.
tags: khamphaniimigaqo yemidiya yoluntuImidiya yokuncokolakwimidiya yoluntuimithetho yemidiya yoluntuiingcebiso zoluntu
Phezulu kwe-10 kufuneka ube ne-iPhone Photo Apps
Nov 30, 2012 kwi-1: 55 AM
Ngamanye amaxesha ndiyayityeshela imithetho kodwa ngandlela thile ndiyabahlonipha abantu abathobela loo mithetho, kodwa kwimidiya yoluntu ndiyayinyamezela imigaqo ndenza yonke into endiyifunayo ngaphandle kokukhathalela imigaqo.
Mar 4, 2013 ngo-11: 54 AM
Andivumelani nemfumba yezi kwaye andicingi nokuba ezinye ziyimithombo yeendaba.
Mar 5, 2013 ngo-10: 45 AM
Siyavumelana @ barryjfeldman: disqus!
Epreli 11, 2013 ngo-5: 13 PM
"Imidiya yokuncokola isencinci kakhulu ke ukusebenzisa imigaqo okwangoku kubonakala kungaphambi kwexesha." Ayisiyiyo kuphela ngaphambi kwexesha - kwawona mgaqo wokuthengisa kwimithombo yeendaba zentlalo 'iMithetho' iyahlekisa! Ditto kubo bonke obo bukhazikhazi 'kwezona ndlela ziQhelekileyo' zentlalo… Ngaphandle kokuba ndizama ukuthengisa incwadi yam yamva - kwimeko enjalo, qhubeka uzifumba!
Ngokukrakra - akukho namnye umhla ongcono okanye ixesha lokuthumela ku-Twitter… .okanye enye into eyenye yokwenza umsebenzi wentlalontle kwiimveliso - ukuthengisa kwintlalo kunezinto ezininzi ezinokuthi zenze ukuba intloko yakho ijikeleze ucinga nje ngazo! Intlalo inomdla… inzima… ukugcwala ngamandla okuthengisa - kunye neengozi ezinokubakho kuye nawuphi na umthengisi ozama ukwenza ubomi bube lula!